सजावटी भित्ता स्टिकर तपाईंको घर परिवर्तन गर्न सजाउनुहोस्
सजावटी भित्ता स्टिकर तपाईंको घर रूपान्तरण गर्न
मारिया vazquez | 22/07/2021 10:00 | सजाउनुहोस्
के तपाइँ तपाइँको भित्ताहरूमा नयाँ र ताजा हावा दिन चाहनुहुन्छ? सजावटी भित्ता vinyls तपाईं सजिलै र सस्तोमा बनाउनको लागि अनुमति दिन्छ। यस प्रकारको कोटिंगको कुनै सीमा छैन, थप रूपमा, आज र घरको कुनै पनि कोठामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, भान्छा र बाथरूम सहित। तर, सजावटी भिनालहरू के हुन् र हामी उनीहरूका घरमा कसरी फाइदा लिन सक्छौं?
1 सजावटी विनाइल भनेको के हो?
1.2 यो राख्न यो सजिलो छ
2 V विनाइल विचारहरू जुन तपाईंको घरलाई रूपान्तरण गर्दछ
2.2 हेडबोर्डको रूपमा
2.3 फर्निचरको एक टुक्रा फ्रेम गर्न
2.4 एक एक्सेन्ट भित्ता सिर्जना गर्न
सजावटी विनाइल भनेको के हो?
सजावटी विनाइल एक तत्व हो जसले काठ, धातु, प्लास्टिक, गिलास वा क concrete्क्रीट जस्ता सतहहरूको कोपिंगलाई सजिलो बनाउँदछ, जबसम्म उनीहरू सफा हुन्छन्। एक आत्म चिपकने पाना जुन कि प्रयोग गरी बनाइएको हो पॉलीभिनल क्लोराइड (PVC) समर्थन गर्दै र यसको एक छेउमा प्रिन्टि has छ, र अर्कोमा विशेष गोंद सुरक्षित गरिएको छ, फलस्वरूप, पानाले चाहिएको सतहमा यसको प्लेसमेन्ट सहज गर्दछ।
हालका दशकहरूमा सजावटी भिनालहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्। आन्तरिक सजावटमा यी द्वारा लोकप्रियता सम्भव भएको छ उत्पाद विविधीकरण र विशेषज्ञता। आज, उनीहरु बाथरूम वा भान्छा जस्तो उच्च आर्द्रता कोठामा पनि राख्न सकिन्छ। यसैले यसको फाईदा अब धेरै धेरै छ।
यसको प्लेसमेन्ट सरल, छिटो र स्वच्छ छ। तपाईं आफैंलाई स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ, पेशेवरलाई काममा लिनु आवश्यक पर्दैन।
तिनीहरू धेरै सतहहरूमा अनुकूल छन। एक मात्र अवस्था यो हो कि यस सतह चिकना छ कि यो राम्रोसँग पालन गर्दछ।
तिनीहरूले महान अनुकूलन अनुमति। विभिन्न ढाँचाहरूमा भित्ता स्टिकरहरू खरीद गर्न सक्षम हुनुको साथै, तपाईं आफ्नो फोटो वा चित्रणमध्ये एउटाबाट पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको एक विशेष कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नु हो जुन तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्दछ।
तिनीहरूको मूल्य सस्तो छसबैभन्दा महँगो हुनु भनेको त्यो किच्न र बाथरूमको लागि उपयुक्त हो।
तपाईं सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुनेछ जब तपाईं तिनीहरूबाट थाकनुहुन्छ
तिनीहरूसँग उच्च स्थायित्व छ
तिनीहरू सफा गर्न सजिलो छ: किनकि यो एक प्लास्टिक तत्व हो, यो सफा गर्न धेरै सजिलो छ, कागज विपरीत।
यो राख्न यो सजिलो छ
सतह सफा गर्नुहोस्। धुलो र ग्रीसले यसलाई राम्रोसँग चिपकने ठाउँ राख्न गाह्रो बनाउन सक्छ। तर पनि पानी, ताकि तपाईले यो सुनु पर्छ कि यो सुकिसकेको हुनु अघि तपाईले सुरू गर्नु अघि।
पेन्सिल प्रयोग गरेर केहि बनाउनुहोस् तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न भित्तामा मार्कहरू कहाँ सजावटी vinyl राख्नु को लागी।
त्यसो भए, विनाललाई ती चिन्हहरूमा समायोजित गर्नुहोस्, आवश्यक चिपकने हटाउने र पारदर्शी तहमा मास्किंग टेप राखेर वाहकको रूपमा सेवा गर्दछ। ताकि यो भित्तामा स्थिर छ र यो तपाईको लागि काम गर्न सजिलो छ।
एकचोटि सकियो, कागज पछाडि अलि अलि हटाउनुहोस् स्पटुलाको सहयोगमा विनाइल थिच्ने क्रममा बबलहरू गठन हुनबाट रोक्नको लागि र सम्भावित रिink्कहरू हटाउन एकै समयमा। तपाईं spatula संग आन्दोलन (जो सामान्यतया विनाइलको साथ प्रदान गरिएको छ, सधैं केन्द्रको बाहिरबाट हुनुपर्दछ।
एक पटक सबै विनाइल चिपकाइए पछि, हटाउनुहोस् - यदि तपाईंसँग यो छ- अगाडिबाट सुरक्षात्मक फिल्म।
V विनाइल विचारहरू जुन तपाईंको घरलाई रूपान्तरण गर्दछ
निश्चित कोठामा प्रवेश गरेको र वर्षौंको लागि उस्तै हेर्दै उदास हुनुहुन्छ? के हुन्छ यदि हामी तपाईंलाई भन्न सक्छौं कि तपाईं सक्नुहुन्छ यसलाई सरल र आर्थिक रूपान्तरण गर्नुहोस्? अरूले भन्दा धेरै उल्लेखनीय प्रोजेक्टहरू छन् यद्यपि, सजावटको भित्ता भिन्नलहरूले तपाईंलाई कुनै पनि कोठा परिवर्तन गर्ने अवसर दिन्छ। नोट लिनुहोस्!
के तपाईं आफ्नो भान्छाको रूप बदल्न चाहनुहुन्छ? सजावटी भिनालहरूले तपाईंलाई आर्थिक रूपमा र कामहरू बिना नै यसलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। को टाइल vinyls तिनीहरू यो कार्यको लागि सबै भन्दा लोकप्रिय र एक प्रवृत्ति हो। तपाईंको पुरानो टाईलहरू बिर्सनुहोस् र ज्यामितीय नमुना र रंगको माध्यमबाट कोठामा व्यक्तित्व थप्नुहोस्। तिनीहरूलाई ड्यासबोर्डमा वा भोजन क्षेत्रमा राख्नुहोस्, पहिलो केसमा सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू तातो र आर्द्रता प्रतिरोधात्मक गुणस्तरका छन्।
बेडरूम अरू कोठाहरू हो जुन सजावटी भिन्टलको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई हेडबोर्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यसैले मुख्य पर्खाललाई साधारण तरिकाले रूपान्तरण गर्नुहोस्। तपाईं केवल केहि पैसा बचत गर्नुहुने छैन, तर ठाउँ पनि सानो बेडरूममा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। जनावरको आकृतिहरू बच्चाहरूको शयनकक्षका लागि मनपर्दछ, जबकि ज्यामितीय जुन वयस्क शयनकक्षहरूको लागि फेसनल प्रस्ताव हो।
फर्निचरको एक टुक्रा फ्रेम गर्न
के तपाइँ कुनै विशेष क्षेत्रमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ? फर्निचरको त्यो आधारभूत टुक्रालाई शक्ति दिनुहोस् जुन अन्यथा सम्पूर्ण रूपमा कोठामा ध्यान नदिई जान्छ? परिभाषित आकृतिहरूको साथ सजावटी भित्वल vinesls यसको लागि एक ठूलो सहयोगी हो। तिनीहरूलाई सादा वा नरम रंगहरूमा छान्नुहोस् र तिनीहरूलाई भित्तामा राख्नुहोस्, फर्निचर वा फर्निचरमा प्रश्न मा, तपाईं निम्न चित्रहरु मा देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा।
एक एक्सेन्ट भित्ता सिर्जना गर्न
हाम्रो पछिल्लो प्रस्तावको साथ हामी तपाईंलाई ठूलो सोच्न आमन्त्रित गर्दछौं! यसका लागि सब भन्दा उपयुक्त विनाइल प्रयोग गरी पूर्ण पर्खाल खेल्न। तपाईं सजावटी भित्ता स्टीकर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कंक्रीट वा काठको नक्कल गर्दछ, पर्खाल को बनावट परिवर्तन गर्न र यसलाई अधिक आकर्षक बनाउन।
तपाईं दोहोर्याइएको ज्यामितिक नमूनाहरूमा पनि शर्त लगाउन सक्नुहुनेछ, पर्सनमा रिर्चार्ज नगरी व्यक्तित्व थप्न। वा अधिक साहसी हुनुहोस् र ल्यान्डस्केप मोटिफको साथ विनाइल स्टिकर प्रयोग गरेर ठूलो भित्ती चित्रण सिर्जना गर्नुहोस् ट्रपिकल मोटिफ्स आज मनपर्नेहरू!
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » सजाउनुहोस् » सजावटी भित्ता स्टिकर तपाईंको घर रूपान्तरण गर्न
कस्तो प्रकारको टाईलहरू तपाइँको बाथरूममा राख्नु पर्छ